14 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 2 “Uyu ndiwo uchava mutemo womunhu ane maperembudzi+ pazuva raachanzi akachena, paanofanira kuunzwa kumupristi.+ 3 Mupristi anofanira kubuda kunze kwomusasa, uye mupristi anofanira kutarira; kana hosha yemaperembudzi yapora+ pamunhu wacho ane maperembudzi, 4 mupristi anofanira kubva arayira; iye anofanira kutora shiri mbiri mhenyu dzakachena+ nekatanda komusidhari+ neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi+ nehisopi+ zvokuti azvichenese nazvo. 5 Zvino mupristi anofanira kurayira, imwe shiri inofanira kuurayirwa mumudziyo wevhu une mvura yakachena.+ 6 Zvino iye ngaatore shiri iya mhenyu pamwe chete nekatanda komusidhari neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nehisopi, azvinyike pamwe chete neshiri iya mhenyu muropa reshiri inenge yaurayirwa pamusoro pemvura yakachena. 7 Anofanira kubva arisasa+ kanomwe+ pamunhu ari kuzvichenesa pamaperembudzi uye anofanira kumuti akachena,+ uye anofanira kurega shiri yacho mhenyu ichienda kusango.+ 8 “Zvino munhu ari kuzvichenesa anofanira kugeza nguo dzake,+ oveura bvudzi rake rose, ogeza+ nemvura, ave akachena, uye pashure paizvozvo angapinda mumusasa. Asi anofanira kugara kunze kwetende rake kwemazuva manomwe.+ 9 Pazuva rechinomwe anofanira kuveura bvudzi rake rose mumusoro make+ nepachirebvu chake nepatsiye dzake. Chokwadi, anofanira kuveura bvudzi rake rose, uye anofanira kugeza nguo dzake, ogeza muviri wake nemvura; uye achava akachena. 10 “Zvino pazuva rechisere+ ngaatore makondohwe maduku maviri akanaka negwayana gadzi+ rimwe chete rakanaka, rine gore rimwe chete, nezvegumi zvitatu zveefa yefurawa yakatsetseka kuti zvive chinopiwa chezviyo+ chakakanyiwa nemafuta nechiyero cherogi imwe chete yemafuta;+ 11 uye mupristi anomuti akachena anofanira kuuya nomunhu wacho ari kuzvichenesa, nezvinhu zvacho, pamberi paJehovha pasuo retende rokusanganira. 12 Mupristi wacho anofanira kutora gondohwe rimwe duku oribayira kuti rive chinopiwa chemhosva+ pamwe chete nechiyero cherogi+ yemafuta uye anofanira kuzvizunguzira kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa+ pamberi paJehovha. 13 Zvino anofanira kuurayira gondohwe duku munzvimbo+ inowanzourayirwa chinopiwa chechivi nechinopiwa chinopiswa, munzvimbo tsvene,+ nokuti, kufanana nechinopiwa chechivi, chinopiwa chemhosva ndechomupristi.+ Icho chinhu chitsvenetsvene. 14 “Mupristi anofanira kutora rimwe ropa rechinopiwa chemhosva, uye mupristi wacho anofanira kuriisa pamucheto wenzeve yokurudyi yomunhu ari kuzvichenesa nepachigunwe chikuru choruoko rwokurudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yokurudyi.+ 15 Mupristi anofanira kutora mamwe mafuta pachiyero cherogi+ oadururira muchanza chake chokuruboshwe. 16 Mupristi anofanira kunyika chigunwe chake chokurudyi mumafuta ari muchanza chake chokuruboshwe, asase mamwe mafuta nomunwe wake kanomwe+ pamberi paJehovha. 17 Zvino mupristi achaisa mamwe mafuta anenge asara muchanza chake pamucheto wenzeve yokurudyi yomunhu ari kuzvichenesa nepachigunwe chikuru choruoko rwake rwokurudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yokurudyi pamusoro peropa rechinopiwa chemhosva.+ 18 Mupristi wacho achaisa mafuta anenge asara muchanza chake chokurudyi mumusoro momunhu ari kuzvichenesa, uye mupristi wacho anofanira kumuyananisira+ pamberi paJehovha. 19 “Zvino mupristi anofanira kupa chinopiwa chechivi,+ oyananisira munhu ari kuzvichenesa pakusachena kwake, uye pashure paizvozvo ngaauraye chinopiwa chinopiswa. 20 Mupristi anofanira kupisira chinopiwa chinopiswa nechinopiwa chezviyo+ pamusoro peatari, uye mupristi+ anofanira kumuyananisira;+ uye iye achava akachena.+ 21 “Asi kana iye ari munhu akaderera+ uye asingagoni kuwana zvinhu zvakaenzanirana,+ anofanira kubva atora gondohwe duku rimwe chete kuti rive chinopiwa chemhosva nokuda kwechinopiwa chinozunguzirwa kuti amuyananisire uye chegumi chimwe cheefa yefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti chive chinopiwa chezviyo pamwe chete nechiyero cherogi yemafuta, 22 nemagukutiwa+ maviri kana kuti hangaiwa duku mbiri, maererano nezvaangagona kuwana, imwe yacho ngaive chinopiwa chechivi uye imwe yacho ngaive chinopiwa chinopiswa. 23 Pazuva rechisere+ anofanira kuuya nazvo kumupristi pasuo retende rokusanganira+ pamberi paJehovha kuti anzi akachena.+ 24 “Zvino mupristi anofanira kutora gondohwe duku rechinopiwa chemhosva+ nechiyero cherogi yemafuta, uye mupristi anofanira kuzvizunguzira kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ 25 Anofanira kuuraya gondohwe duku rechinopiwa chemhosva, uye mupristi anofanira kutora rimwe ropa rechinopiwa chemhosva, oriisa pamucheto wenzeve yokurudyi yomunhu ari kuzvichenesa nepachigunwe chikuru choruoko rwake rwokurudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yokurudyi.+ 26 Zvino mupristi achadururira mamwe mafuta muchanza chokuruboshwe chomupristi.+ 27 Mupristi anofanira kusasa+ nomunwe wake wokurudyi mamwe mafuta ari muchanza chake chokuruboshwe kanomwe pamberi paJehovha. 28 Mupristi anofanira kuisa mamwe mafuta ari muchanza chake pamucheto wenzeve yokurudyi yomunhu ari kuzvichenesa nepachigunwe chikuru choruoko rwake rwokurudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yokurudyi pamusoro penzvimbo yeropa rechinopiwa chemhosva.+ 29 Mupristi achaisa mafuta anenge asara muchanza chake mumusoro+ momunhu ari kuzvichenesa kuti amuyananisire pamberi paJehovha. 30 “Anofanira kupa rimwe remagukutiwa kana kuti imwe yehangaiwa duku yaangagona kuwana,+ 31 imwe yacho yaangagona kuwana kuti ive chinopiwa chechivi+ neimwe yacho kuti ive chinopiwa chinopiswa+ pamwe chete nechinopiwa chezviyo; uye mupristi anofanira kuyananisira+ munhu ari kuzvichenesa pamberi paJehovha. 32 “Uyu ndiwo mutemo womunhu aiva nehosha yemaperembudzi akanga asingagoni kuwana zvinhu zvaidiwa paaifanira kunzi akachena.” 33 Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti: 34 “Kana masvika munyika yeKenani,+ yandiri kukupai kuti ive nhaka yenyu,+ kana ndikaisa hosha yemaperembudzi muimba yenyika yenhaka yenyu,+ 35 muridzi weimba yacho anofanira kubva auya audze mupristi, achiti: ‘Ndaona chimwe chinhu chakaita sehosha mumba.’ 36 Zvino mupristi anofanira kurayira, uye vanofanira kubudisa zvinhu zvose muimba yacho mupristi asati asvika kuzoona hosha yacho, kuti arege kuti zvinhu zvose zviri mumba hazvina kuchena; uye pashure paizvozvo mupristi achapinda kuti aone imba yacho. 37 Kana achinge aona hosha yacho, kana hosha yacho iri mumadziro emba, iine nzvimbo dzakapinda mukati dzegirini yakada kuita yero kana kuti dzakatsvukuruka, uye dzichioneka kuti dzakapinda mukati memadziro, 38 mupristi anofanira kubva abuda mumba macho, aende pasuo reimba yacho, uye anofanira kuvhara+ imba yacho kwemazuva manomwe. 39 “Zvino mupristi wacho anofanira kudzoka pazuva rechinomwe atarire;+ kana hosha yacho yapararira nemadziro emba, 40 mupristi anofanira kubva arayira, uye vanofanira kubvisa+ matombo ane hosha yacho, uye vanofanira kuakanda kunze kweguta munzvimbo isina kuchena. 41 Ngaaite kuti imba yacho iparwe mukati kumativi ose, vadururire dhaka ravanenge vapara kunze kweguta munzvimbo isina kuchena. 42 Zvino vanofanira kutora mamwe matombo, voaisa munzvimbo yaimbova nemamwe matombo; uye iye achaita kuti vatore rimwe dhaka, uye anofanira kuita kuti imba yacho idzururwe. 43 “Kana hosha yacho ikadzoka, yobuda mumba macho pashure pokubvisa matombo uye pashure pokupara imba yacho nokuidzurura, 44 mupristi+ anofanira kubva auya atarire; uye kana hosha yacho yapararira nemba yacho, iwo maperembudzi akaipa+ ari mumba macho. Iyo haina kuchena. 45 Zvino anofanira kuita kuti imba yacho iputswe pamwe chete nematombo ayo nematanda ayo nedhaka rose reimba yacho uye anofanira kuita kuti zvitakurwe zviendeswe kunze kweguta kunzvimbo isina kuchena.+ 46 Asi munhu wose anopinda mumba macho chero mazuva api zvawo ainenge yakavharwa+ achava asina kuchena kusvikira manheru;+ 47 uye munhu wose anorara mumba macho anofanira kugeza nguo dzake,+ uye ani naani anodyira mumba macho anofanira kugeza nguo dzake. 48 “Zvisinei, kana mupristi akauya akatarira, akaona kuti hosha yacho haina kupararira nemba pashure pokudzurura imba yacho, mupristi anofanira kubva ati imba yacho yakachena, nokuti hosha yacho yapora.+ 49 Anofanira kutora shiri mbiri+ nekatanda komusidhari+ neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi+ nehisopi kuti anatse imba yacho pachivi. 50 Anofanira kuurayira shiri imwe mumudziyo wevhu mumvura yakachena.+ 51 Anofanira kutora katanda komusidhari nehisopi+ neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi neshiri mhenyu ozvinyika muropa reshiri inenge yaurayiwa uye mumvura yakachena, uye anofanira kurisasa+ paimba yacho kanomwe.+ 52 Anofanira kunatsa imba yacho pachivi achishandisa ropa reshiri nemvura yakachena neshiri mhenyu nekatanda komusidhari nehisopi neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi. 53 Anofanira kuregedza shiri mhenyu kuti iende kunze kweguta kusango ayananisire+ imba yacho; uye inofanira kuva yakachena. 54 “Uyu ndiwo mutemo une chokuita nehosha yemaperembudzi+ chero ipi zvayo une chokuita nokudonha bvudzi kusingawanzoitiki,+ 55 une chokuita nemaperembudzi epanguo+ neomumba, 56 une chokuita nebundu nemhezi nechidzvanga,+ 57 kuti upe mirayiridzo+ kana chinhu chisina kuchena uye kana chinhu chakachena. Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemaperembudzi.”+